August 21, 2018 - TV Annapurna
गाडी नकिन्न जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
August 21, 2018 Annapurna TV
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई गाडी नकिन्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार नेकपा प्रदेश कमिटीको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूभन्दा पहिला जनतालाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे । ‘तपाईंहरू पहिला आफूलाई गाडी किन्ने काम नगर्नुस्, यस्ता कुरामा सधैं होसियार रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला म र मेरा लागि होइन, जनताका लागि भन्ने हेक्का सबैमा हुनुपर्छ ।’ जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले जनताले वामपन्थीलाई कुर्सीमा बस्नका लागि मात्र सरकारमा नपठाएको बताए । ‘जनताले मन पराउने काम गर्नुस्, सस्तो लोकप्रियताका लागि झूट नबोल्नुस्,’ ओलीले भने, ‘देश बनाउने जिम्मा…
ट्याक्सी चालकलाई अनिवार्य रुपमा पहेँलो फ्लोरेसेन्ट ज्याकेट
काठमाडौं । ट्याक्सी चालकले अनिवार्य रुपमा पहेँलो फ्लोरेसेन्ट ज्याकेट लगाउनु पर्ने भएको छ । उपत्यकाका ट्याक्सी चालकहरुका लागि छुट्टै ड्रेस तय गर्ने विषयमा धरै पटक छलफल भएको थियो । छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि ड्रेसको साटो ज्याकेट लगाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो । ट्याक्सी चालकलाई पहेँलो फ्लोरेसेन्ट ज्याकेटको लगाउनु पर्ने व्यवस्था महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले लागू गर्न लागेको हो । ट्याक्सी चालकले अनिवार्य रुपमा बुधबारदेखि ज्याकेट लगाउनु पर्ने नियम लागु गर्ने लागेको छ।
नेपालमै सम्भव हुने उपचारका लागि विदेश जाँदा नेताहरुलाई उपचार खर्च नदिन व्यवस्था
काठमाडौं । सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले नेपालमै सम्भव हुने उपचारका लागि विदेश जाँदा नेताहरुलाई उपचार खर्च नदिन व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । जनस्वास्थ्य सेवा विधेयकमाथि संसदमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा र प्रमखु विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले उपचार खर्चमा कडाइ गर्न माग गरेका हुन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले नेपालमै हुने उपचारका लागि पनि विदेश गएको अवस्थामा राज्यले एक रुपयाँमा पनि दिन नहुने प्रावधान विधेयकमा थप्नुपर्ने बताए । ‘विदेशमा उपचार गर्ने सन्दर्भमा केही बुँदा राखेर थप दफाहरुको व्यवस्था गर्नैपर्छ’ उनले भनेका छन् । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री…
नेपालको कर संसारकै सस्तोः प्रधानमन्त्री
August 21, 2018 August 21, 2018 TV-Annapurna
नेपालमा लगाइएको कर संसारकै सस्तो भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गरेका छन् । आज विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा लगाइएको कर सस्तो भएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कर र राजश्वका बारेमा जनतालाई भ्रम फैलाउने गरी प्रचार भएको भन्दै त्यस्तो गलत प्रचार नगर्न आग्रह समेत गरे। स्थानीय तहले जनतालाई मार पर्नेगरी कर लगाएको भन्दै सरकार र स्थानीय तहको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहले लगाएको करको बचाऊ गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
तपाईले १ कप कफीलाई कति तिर्नुहुन्छ ? ५०, १०० वा १ सय ५० । तर भेनेजुएलामा १ कप मिल्क कफीको मूल्य सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्छ । यदपी यो सत्य हो । त्यहाँ एक कप कफीको मूल्य २५ लाख बोलिवार पर्छ । हरेक २६ दिनपछि सामानको मूल्य दुई गुणाले बढिरहेको छ । जुलाई ३१ मा राजधानी कराकसको एउटा क्याफेमा एक कप कफी २५ लाख बोलिवारमा बिक्री भैरहेको थियो । त्यस्तै एक किलो टमाटरको मूल्य ५० लाख बोलिवार रहेको छ । भनेजुएलामा महंगाई यति धेरै बढेको छ कि हर २६ दिनपछि सामानको…
नेपालमा अश्लिल साईटको बिगबिगी, सरकारले नियमन नगर्दा बढ्यो अपराध
August 21, 2018 September 21, 2018 Annapurna TV
अमेरिकी पोर्नस्टार सन्नी लियोन, ३०, भारतको एक टेलिभिजन कार्यक्रम ’बिग बोस’मा सहभागी हुने खबरलगत्तै त्यहाँ एकप्रकारको तहल्का मच्चियो। त्यसको प्रभाव छिमेकी देशहरूमा समेत उस्तैगरी पर्यो । बंगलादेश र पाकिस्तानमा सबैभन्दा बढी गुगलमा खोजिएकी सेलिब्रिटी बनिन् लियोन। नेपालबाट समेत पछिल्लो झन्डै साढे तीन महिनामा लियोनलाई १ सय ६० प्रतिशतभन्दा बढीले खोजी भयो। यसले के देखाउँछ भने इन्टरनेटमा पोर्न (अश्लील) साइट खोजीमा नेपालीको चासो पनि बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। यौनजन्य सामग्री, कामुक तस्बिर र भिडियोहरू तथा त्यस्तै खाले गीतसंगीतमा पनि युवापुस्ताको रुचि आकासिँदो छ। नेपालमा इन्टरनेट भित्रिएको दुई दशक पनि भएको छैन।…
बाग्लुङ देखि बुर्तिबाङग तर्फ जादै गरेको जीप दुर्घटना भएको छ। म्.गलवार दिउँसो बागलुङबाट पश्चिम बुर्तिबाङका लागि छुटेको लु १ ज ९२३ नम्बरको जीप वडिगाड गाउँपालिका २ न्वार नजिकै दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । जीपमा सवार ५ जना मध्ये गुल्मी मालिका २ बर्ष ५० का गंगा थापा, रकुम उत्तर गंगा गाउँपालिका ९ का ३२ बर्षका दुलोचन बुढा ,ढोरपाटन नगर १ बर्ष ३० कि ब्रमकुमारी प्रतिभा, र चालक धादिङ २० का अर्जुन तामाङको अवस्था गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि पोखरा पठाएको ईलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङले जनाएको छ ।…
उदयपुर । उदयपुरमा श्रीमतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा श्रीमान पक्राउ परेका छन् । जिल्लाको रौतामाई गाउँपालिका वडा नं. २ का ४५ वर्षका दिप बहादुर राउत पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । नावालिका छोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको र आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी राउतविरुद्ध श्रीमतीले उजुरी दिएकी थिइन् प्रहरी उपरीक्षक मेघराज अधिकारीले भने, पीडितको उजुरीको आधारमा पीडक राउतलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध जथाभावी पोस्ट गर्ने एक जना प्रहरी खोरमा पुगेका छन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसपी नरेन्द्र उप्रेतीका अनुसार भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका ३ का ४१ वर्षीय होमनाथ सिग्देललाई पक्राउ गरिएको हो । उनी काभ्रेको रोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का सचिव हुन्। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ बमोजिम विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई १ लाखसम्म जरिवान वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत केशव झाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका तीन जनाको पोलीग्राफ गरिने भएको छ । मृत्यु शंकास्पद रहेको भन्दै तीनै जनाविरुद्ध अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद समेत लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार विहान आफ्नै निवासमा मृत भेटिएको झाको हत्या नै भएको प्रहरीको अनुमान छ। अपराध महाशाखाको टोलीले त्यही घरमा काम गर्ने माली, भान्से र गार्डलाई सोमबार नै पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका तीन जनलाई पोलिग्राफ टेष्ट गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ। फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत रहेका झाको टाउको र निधारमा चोट…